Cryptocurrencies: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, ... zvese nezve cryptos | Gadget nhau
El nyika yemakristcheni iri kusimba zuva nezuva. Makore mashoma apfuura huwandu hwevashambadziri mumakristpto mari chaive chidiki asi zuva nezuva vanhu vazhinji vari kupinda mune ino shanduko shanduko inosanganisira kupinda kwemakristpto mumisika yemari.
Unoziva here kuti Bitcoin chii? Ungazvifarira here tenga Bitcoins? Unoziva here chii chinonzi ethereum Uye iwe unoziva here simba iro iro chikuva rinogona kukupa iwe? Chii chinonzi Bitcoin forogo? Ndeupi musiyano uripo pakati peBitcoin neBitcoin Cash? Ndeipi mari Litecoin uye yakasiyana sei neBitcoin? Chii chinonzi ICO uye ndinoisa sei mari mairi? Ndeapi macryptocurrencies ayo achawedzera kukosha kwavo zvakanyanya mumwedzi inotevera kana makore
Yese mibvunzo iyi ndiyo inobvunzwa nevanhu vazhinji mazuva ese uye kubva kuActualidad Gadget tirikukubatsira kuti unzwisise chikamu chitsva ichi sezvazvinogona.
Zvakakosha zvinyorwa nezve Cryptocurrencies
Kana iwe urikutangisa kunze munyika ye cryptocurrencies ipapo zvinyorwa izvi zvichakubatsira zvikuru.
Comprar Bitcoin: chii chinonzi Bitcoin, chinoshanda sei uye sei kutenga bitcoins
Tenga Ethereum: chii chinonzi Ethereum uye kuti ungatenga sei maEthers.
Tenga Litecoin: chii chinonzi Litecoin uye kuti ungaitenga sei
Hashflare, gore cryptocurrency kuchera chikuva.
Cryptocurrency Nhau uye Dzidziso
Tsvaga iyo yazvino cryptocurrency nhau uye dzidziso kukwanisa kuisa mari uye kushanda mune ino chikamu uine yakazara vimbiso.
kubudikidza Miguel Gaton inoita 2 makore .
Mushure mezvese kumusoro uye kuderera uko kwakaperekedza hupenyu hwecryptocurrencies munhoroondo yayo yese, iyo ...
kubudikidza Gadget nhau inoita 2 makore .
Kunyangwe iwe usingawanzo gara kurarama kunge chirevo svosve murungano, hazvina musoro kuita chete sekicada, uye ...
Cryptocurrencies yakagara kubvira yakasiya iyo niche yekuda kungoziva kuti ive, yavo pachavo, ...
kubudikidza Eder Esteban inoita 4 makore .
Iyo cryptocurrency musika, neBitcoin iri pamberi, haina gore rakanakisa. Kukosha kwayo kwawa ...
Iyo cryptocurrency yekumhanyisa haisati yapera izvozvi. 2018 haisi kunyatsoita musika uyu, ...
Facebook inogadzirira nyowani blockchain chikamu
Mwedzi iyi tiri kuona kuti makambani mangani ari kubheja paBlockchain, iyo vazhinji vanoona sehunyanzvi hweramangwana. Zvakare…
Imwe nguva yapfuura Teregiramu yakazivisa kupinda kwayo mumusika we cryptocurrency neGram. Kutanga chirongwa ichi, ...
Kudzorera kukuru kutsva kweWikiLeaks. Sezvo account yavanayo muCoibase yakavharwa. Chisarudzo icho ...
Iyo cryptocurrency yekumhanyisa inoita kunge haisati yasvika kumagumo. Sezvo vazhinji vashandisi vachiramba vachichera yangu Bitcoin ...
Mugore rose ra2017, isu takakwanisa kuona kuti macryptocurrencies, akadai seBitcoin, Ether nevamwe, akapfura sei zvakanyanya ...
Boka revanjinjini vanoshanda kuFederal Nuclear Center muRussia, nzvimbo yepamusoro yakavanzika yenyukireya, vanga vari ...